Muxuu Siciid Sulub ka yidhi Is-casilaadda Gabboose iyo inuu Damac kaga jiro Kursiga uu Banneeyay | Somaliland Post
Home News Muxuu Siciid Sulub ka yidhi Is-casilaadda Gabboose iyo inuu Damac kaga jiro...
Muxuu Siciid Sulub ka yidhi Is-casilaadda Gabboose iyo inuu Damac kaga jiro Kursiga uu Banneeyay
Wasiirkii Hawlaha Guud ee Xukuumaddii Rayaale
Hargeysa (SLpost)- Wasiirkii hore ee Hawlaha guud iyo Guryeynta Somaliland Siciid Sulub Maxamed, ayaa ka hadlay aragtidiisa is-casilaadda Wasiirkii arrimaha gudaha Dr. Maxamed Cabdi Gabboose oo khamiistii ku dhawaaqay inuu iska casilay xilka uu Xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo ka hayey.
Siciid Sulub ayaa sheegay in laga been abuuray war ay Wargeysyada qaarkood baahiyeen oo sheegayey in damac ka haya Kursiga uu Dr. Gaboose banneeyey. Ugu horreyn Siciid Sulu boo ka hadlayey sida uu u arko is-casilaadda Dr. Gabboose, waxa uu yidhi; “Is-casilaadda Dr Gabboose anigu aragti ahaan waxaan u arkaa, maahmaah Soomaali ah ayaa waxay tidhaahdaa; ‘Nin Faras dabadii ka degay wax u dhaama ayuu waayay’. Waxaa jirtay xan suuqa ku jirtay baryahan in la eryayayo Gabboose, markaa waaxan filayaa inuu tashaday oo uu is yidhi; ‘intaan laga xarrago qaadan adigu meesha iskaga tag oo bannee, sida aynu la wada socono dawladdii ina Cigaal Dr Gabooso waxa uu ka ahaa Wasiir Wasaaradda arrimaha gudaha, shan bilood markuu shaqanayey habeen ayaa qaflad lugu qabtay Janankii Ciidammada oo markaa ahaa Cilmi-kabaal ayaa la soo diray 3-dii habeenimo oo markaa waqraqad u siday oo hidhbaa ku dhacay, markaa isaga oo tii oo kale ka baqaya in warqad Saqadhi Dubbad sido loo keeno.”
Siciid Sulu boo la weydiiyey inuu faahfaahiyo xanta uu sheegay inay Gaboose suuqa ugu jirtay, waxa uu ku jawaabay; “Run ahaantii anigu immika kuma dhex jiro qorshahan, markaa waxyaabaha lugu eryayo iyo sababaha waxa la waydiinayaa Xukuumadda iyo dadka xogogaalka u ah, laakiin sida aniga isoo gaadhaysa waxaan maqlay in isaga iyo rag kale aanay dhaafayn bishan Ramadaan.”
Mar la weydiyey Siciid Sulub inna inay wax damac ahi ka hayo buuxinta Kursiga Gabboose oo shalay qaar ka mid ah Wargeysyada dalku baahiyeen, waxa uu ku jawaabay oo uu yidhi; “Arrintaasi wa arrin la yaab leh aniguba maanta (shalay) ayaan maqlay dad meel ku qoray magacyo aan ku jiro, anigu waxaan ahaaa nin ka tirsan Xukuumaddii hore waxaan ahay nin UDUB ah oo markaa dadkuna wuu kala suntan yahay. Way jiraan dad xisbiyada iyo waxaa kala beddasha, aniga waxaa la igu yaqaanana in aanan mabda’ayga ka leexan, markaa aniga xukuumaddan immik jirta wax hunguri ah oo iga haya inaan ka mid noqdo ma jiro. Waxaa jira rag badan oo naf iyo maalba u soo horay Xisbiga kulmiye maxaa kuwaas loo odhan waayay hungiribaa ka haya?.”
Siciid Sulub mar uu ka hadlayey safarka Madaxweynaha Somaliland kaga soo laabtay dalka Shiinaha, waxa uu yidhi; “Anigu halkaa wax faa’iido ah oo nugu cusub ka UDUB ahaan ma jiro, maaha markii ugu horaysay ee la tago Shiinaha ee heshiis lala sexeexdo Deked ha la sameeyo ama wax kale ha la qabtee, sheekdan ku soo korodhay ee la leeyahay waxaa innoo saxeexaysa Itoobiya, annaga taasoo kale namay soo marin sababtoo ah waxaaynu nahay dal xor ah oo aragtideenna ayeynu u madax-banannahay inkastoo aynaan ictiraaf haysan haddana waad bahantay looma bahalo cuno.”
“Waa ay jirtay anagu dedaallo badan oo aannu galnay xagga safarrada, waxaa jirtay in mararka qaar na lagu xidhi jiray aqoonsi ma haysataan. Waxa kale oo jirtay inay Xukuumado nagala hadlaan iyo sharkado gaar loo leeyahay, markaa anigu marna shaki maangalin jrin macdanta iyo khayraadka dalka, markaa waxa habboon tijaabada annagu galannay ee midho dhali wayday inay waqti iskaga lumiyaan maaha.”
Sidoo kale, Siciid Sulub Maxamed oo ka hadlayey baaqa Xukuumadda Somaliland ee ah in la caawiyo dadka Soomaaliyeed ee Abaaruhu waxyeelleeyeen, waxa uu yidhi; “Baaqa Xukuumadda ee ah in la caawiyo dadka reer Soomaaliya, waxaan u arkaa innagu dad Islaam ah ayaynu nahay, markaa Muslinku Soomali haku abtirsado ama cid kalee wixii dhibaataysan in laga damqado oo wax la taro Diinteenna wanaagsan ayaa inna faraysa, laakiin aniga dareenka I hayaa waxaa weeye in laga sii babadinayo in dadka wax la taro oo sadaqada la baxsado in taasoo kale ku dhacdo.”